Indlu yelizwe kunye nephuli eMedvednica Nature Park
Indlu yamaplanga yesiNtu iTilia, kwifama yaseSovinjak, enechibi elikhulu labucala lokuqubha, ngaphakathi kwepaki yendalo yaseMedvednica. I-Tilia yi-50 square metres enkulu, kukho iibhedi ezi-2 + 2, kunye nebhedi eyongezelelweyo yomntwana. Igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye negumbi lokutyela, igumbi lokulala, kunye negumbi lokuhlambela elinendlu yangasese. Kukho indawo yokucima umlilo ngexesha lokufudumeza. Indlu inikeza Wi-Fi simahla, kunye cable TV (MAX tv). Intle kwaye inoxolo- ilungele iintsapho, abantu abakwiminyaka yabo yegolide, kunye nabantu abathanda ubugcisa.
Ngaphambi kwendlu kukho i-terrace enetafile kunye nezihlalo ezithandathu, kunye nombono omhle we-ranch yaseSovinjak, i-echibi kunye nempuma ye-Medvednica park. Inobuninzi belanga, zombini i-Tilia kunye neendawo ezijikelezileyo zicwangciswe ngengqiqo ephezulu ye-aesthetics, kodwa ifakwe kakuhle kwindalo. Zininzi izinto ezenziwayo zabantwana - indlu emthini, iworkshop yokuyila, i-zip-line, isilayidi kunye nokujingi - ukukhankanya nje ezimbalwa, ukuze abazali babo bangonwabe kwaye baphumle. Ifaneleke kakhulu abantu abakwiminyaka yabo "yegolide" - banokunandipha uxolo, imibala ecebileyo yendalo, ilanga elininzi, njl. Kukho ukufakela okumbalwa komhlaba, kwaye kukho ithuba lokuzibandakanya kwimisebenzi yobugcisa.
Kukho ithuba lokubandakanyeka kwimisebenzi eyahlukeneyo ngelixa e-Tilia - ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba. Ekubeni i-Nature park ummelwane umhle kakhulu, ucebile ngemibala yendalo, kunye nomoya ococekileyo, yi- "Paradesi enemibala eyiwaka".
Indlu inezithako ezisisiseko ezikhoyo - iswekile, ikofu, iiti ezahlukeneyo, ioyile, umgubo, iviniga, irayisi, ityuwa.
Ababuki zindwendwe basoloko bekhona ukuze banike iingcebiso, iingcebiso, izimvo kunye neengcebiso